Beesha Agoonyar oo xariirka ujartay dowladda Farmaajo (Warsaxaafadeed) | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home English News Beesha Agoonyar oo xariirka ujartay dowladda Farmaajo (Warsaxaafadeed)
Beesha Agoonyar oo xariirka ujartay dowladda Farmaajo (Warsaxaafadeed)
Beesha Agoonyar oo kamid ah beel weynta Harti Abgaal waxa ay soo saartay war-murtiyeed ay xariirka ugu jareyso dowlada madaxweyne Farmaajo, beeshan oo uu kasoo jeedo madaxweynihii hore ee Sh Shariif ayaana sheegtay in dowlada aysan wax xaquuq ah ka helin.
Beeshu mar walba waxa ay hormuud u aheyd isu raadinta midnimada Umadda Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta, sidoo kale waxa ay tusaale u tahay difaaca dowladnimada Soomaaliya, iyagoo u huray dhiigooda iyo maalkooda.
Waxay beeshu horseed ka aheyd isu baadi goobka Umadda kala irdhowday ee Soomaaliyeed, sida safarada lagu tagay Caabudwaaq, Boosaaso iyo Gedo, si dib la isugu soo celiyo Umadii colaaduhu kala geeyeen.
Waxay sidoo kale lafdhabar ka aheyd dadaaladii dowladnimada Soomaaliya lagu baadi goobayay, sida shirarkii Addis Ababa, Jabuuti, Eldoreed, Qaahira iyo Jabuuti Maxkamadaha.
Sidoo kale beeshu waxay hogaan ka aheyd dowladihii KMG ahaa ee dhaliyay isu-soo laabashada Umadda Soomaaliyeed iyo in si cadaalad ah wax lagu qeybsado, isla markaana abuuray in dowladda lawada lee yahay, cidna si gaar ah looga faquuqin.
Ugu Danbeyntii Hogaankaas waxa uu suuragaliyay hormarkaan aan maanta ku naalooneyno oo ah in Muqdisho la isku doorto si xor ah, mas’uuliyadana si nabad ah lagu kala wareego, hase yeeshee dowladnimadii aan Aaminsaneyn in lawada lee yahay oo dhiiga wiilsheena ku difaacanay in nalaga takooray oo aan wax xil qaran qeybtii aan ku la heyn nagala siin.
Hadaba waxay beeshu go’aansatay kadib markii ay aragtay sida loo faquuqay loogana leexday masiirkii Umadda iyo wax wada qeybsiga beelaha si siman:
1- In dowladda aan kala noqonay kalsoonida oo aanan waxba ku laheyn, ciidamadeenana kala baxnay difaaca ay ku jiraan.
2- Waxaan umada Soomaaliyeed u sheegeynaa in aanan cidna duulaan ku aheyn sidoo kale waxaan soo dhaweyneynaa qorshaha dib loogu yagleelayo dekada Ceel-macaan.
3- Waxaan fareynaa in Ciidamada Beeshu ay ku soo laabtaan deegaanadooda, gaar ahaan Banaadir iyo Sh/dhexe, si loola tashado.
4- Waxaan u tacsiyayneynaa Umadda Soomaaliyeed oo masiirkooda la dhumiyay, loona turjumay dowladnimada wax dad gaar ah ay lee yihiin, taas oo aan horay uga dagaalanay.
5- Walaalaheyna Beesha Sade waxaan u sheegeynaa in sidii aan ugu lisnay aysan noogu hanbeyn.
6- Bahweynta Soomaaliyeed ee cadaalada iyo sinaanta jecel, waxaan u sheegeynaa in ay nala baadigoobaan sidii cadaalad loo gaari lahaa, dalkeenana loo badbaadin lahaa.
7- Barlamaanka Federaalka waxaan ugu baaqeynaa in ay difaacaan ama Ilaaliyaan Dastuurka iyo Awood qeybsiga, taas oo hada laga weekday, horseedi kartana burbur iyo Jahwareer siyaasadeed.
Previous articleDhageyso:fankii farmaajo oo faraha ka baxshey amniga magagaalada muqadishu
Next articleSawirro: Garoonka diyaaradaha Hobyo oo dib loo howlgaliyey